कर फछ्र्योटबारे महतको टिप्पणी : कालोले अरुलाई पनि कालो नै देख्छ’
काठमाडौं, । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आफूले लुकाएको भनेर आरोप लगाउनु नै हाँस्यस्पद र मिथ्या भएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले यस्तो प्रतिक्रिया दिए...
एमालेले १ भोट बराबर २५ हजार दिएको अडि...
असार ३१, 2074 गुल्मी, । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्वाचनमा एमाले नेताले कांग्रेसका एक कार्यकर्तालाई एक भोटका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार नेपाली कांग्रेस गुल्मीले पत्रकार सम्मेलन गरी ...
राप्रपाभित्रको विवाद भयो छताछुल्ल
असार ३०, 2074 काठमाडौं । दुई धु्रवका पार्टी एकता भएको राप्रपा ३ महिना बित्न नपाउँदै पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टी बढेको छ । जसले पार्टीलाई विभाजनको संगारमै पु¥याइदिएको छ । केही सातादेखि राप्रपामा विवाद चुलिँदै आएको थियो । भित्रभित्र सल्...
३७ जना सांसदहरु एक ढिक्का छन् : राणा
असार २९, 2074 काठमाडौं । सरकार साझेदार दलहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विश्वास नगरी रहेका बेला यसका बरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा एक ढिक्का भएर मत हाल्ने दावी गरेका छन् । उनले...
एमालेले बेइमानीको राजनीति गर्दैछ : वि...
असार २८, 2074 काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मौसमअनुसारको राजनीति गर्दा मुलुकले समस्या व्यहोर्नुपरेको आरोप लगाएका छन् । नेता विश्वकर्माले एमाले बेईमानीका साथ राष्ट्रिय राजनीतिबाट भ...
निर्वाचन खर्चिलो बन्दा हार : माओवादी
असार २७, 2074 काठमाडौं । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बनेका कारण पार्टीले हार वेहोरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास लाजिम्पाटमा बसेको लाजिम्पाटमा मंगलबार बसेको हेडक्वार्टर ब...
संविधान संशोधन प्रस्ताव थप अन्योलमा
असार २७, 2074 काठमाडौं । मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनको माग गरिरहृेका बेला तीन ठूला दलले संशोधनको प्रस्तावलाई थाती राख्ने भएका छन् । तीन ठूला दलले संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाई पुग्न नसक्ने अवस्था आएमा सो प्रस्तावलाई नै थाती राख्ने ...
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सन्तुष्ट छौं ...
असार २६, 2074 काठमाडौं । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीले पाएको सफलतामा नेकपा एमालेले सन्तोष व्यक्त गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले १४ असारमा भएको निर्वाचनमा अनेकौँ प्रतिकूलता भए पनि पार्टी...
राप्रपा एउटा खेमा संशोधनको पक्षमा, अर...
असार २६, 2074 काठमाडौं । शनिवार मात्रै संविधान संशोधनमा एक ढिक्का हुने दावी गरेको राप्रपा फेरि संविधान संशोधनमा दुई धार देखिएको छ । यो सँगै एमाले विना संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारीमा फेरि राप्रपाले भाँजो हालेको छ । पछि सरकारमा जान...
धरानमा बल्ल खोल्यो माओवादीले खाता
असार २६, 2074 धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा नेकपा माओवादीले खाता खोजेको छ । उसले धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ मा प्यानल जितेको छ । धरान १७ मा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार सुर्यबहादुर भट्टराई (मन...
धरानमा एमालेको फराकिलो अग्रता
असार २५, 2074 धरान । पछिल्लो समय मत गणनामा विवादमा फसेको धरान उपमहानगरपालिकामा एमालेले अग्रता कायमै राखेको छ । धरानमा मेयर र उपमेयरमै एमालेका उम्मेद्वारले अग्रता कायम राखेका छन् । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार एमालेका मेयर उम्मेदवार तारा सुब...
राजपालाई नयाँ निर्वाचन चिन्ह नदिइने
असार २५, 2074 काठमाडौं । विभिन्न ६ वटा मधेश केन्द्रित दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई बारम्बार निर्वाचन आयोगले अंकुस लगाइरहेको छ । यसैक्रममा फेरि अर्काे अंकुस लगाएको छ । दुई चरणको निर्वाचन गरेपछि तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भ...
किन देउवाको विकल्प खोजे पौडेलले ?
असार २५, 2074 पोखरा । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत जित हात पार्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र खैलाबैला नै मच्चिन थालेको छ । दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय निकायको ...
जनताले कांग्रेसको सिङ र जुरो खुस्काई ...
असार २४, 2074 धनकुटा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई अहिले सरकारमा जान हतार नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टी स्पष्ट बहुमत ल्याएर मात्रै सरकारमा जाने भएकाले अहिले नै सरकारमा जान खुट्टा नउचाल्ने दावी गरेका छन् । धनक...
बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी र राप्र...
असार २४, 2074 काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप बालुवाटारमा त्रिपक्षीय वार्ता भएको छ । वालुवाटरस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पा...
← अघिल्लो 12… 221 222 223 224 225 226 227 228 229 … 234 235 पछिल्लो →